जीवनमा भुलेर पनि यी पाँच महिलासँग स’म्ब’न्ध नराख्नुहोस् ! फेरि जिन्दगी भरी पछुताउनु पर्ने छ – Krazy NepaL
November 1, 2020 721
एजेन्सी । पुरुषहरु स्त्रीहरुसँग सम्बन्ध राख्न लालायित हुन्छन् । विवाहित र अविवाहित दुवै खाले पुरुषमा महिलाहरुको निकट हुने चाहाना उत्तिकै हुन्छ । तर सबै महिलासँग पुरुषले सम्बन्ध राख्नु उचित हुँदैन । यहाँ पुरुषले निकट संबन्ध राख्न नहुने स्त्रीहरुको बारेमा चर्चा गरिएको छ ।
(१) पूर्व प्रेमिकाः सके सम्म पुरानो सम्बन्धलाई नखोतलेकै राम्रो हुन्छ । किन भने प्रेमिका पूर्व प्रेमिका बन्नु भनेको सम्बन्ध राम्रो नभएर टुङ्गिएको अर्थ लाग्छ ।
कतिपय सन्दर्भमा तपाइँ र उनीबीच गम्भिर समस्या भएकै कारण सम्बन्ध टुटेको हो । कुनै समस्या पर्दा वा दुःख लाग्दा पूर्व प्रेमिकाको सम्झना आउनु फरक कुरा हो तर उनलाई पुनः जीवनमा तान्नु पश्चातपका कारण मात्र बन्न सक्छ ।
(५) साथीकी पुर्व प्रेमिकाः यदि तपाइँको साथीसँगको सम्बन्ध मूल्यवान छ भने उसकी पूर्व प्रेमि पनि समन्ध नबनाउस ।
Prevटेकु अस्पतालले अब मुल्य तोक्यो संक्रमितको उपचारमा खर्च कति लाग्छ ?
Nextपैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? क्रासुला मनी ट्री घरमा लगाउनुस् कैले पैसाको खाचो परदैन